Guddida Doorashooyinka Dadban ee Soomaaliya oo Soo Saaray Liiska Musharixiinta Madaxweynaha – WARSOOR
Guddida Doorashooyinka Dadban ee Soomaaliya oo Soo Saaray Liiska Musharixiinta Madaxweynaha
Muqdisho – (warsoor) – Guddida Doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday liiska rasmiga ah ee musharixiinta u tartamaya jagadda madaxweynaha ee Soomaaliya.
Guddida ayaa liis ay soo saareen oo u kala qornaa sidii ay u kala horeeyeen is-diwaan-galinta musharixiinta ayaa loo qaybiyey warbaahinta. Waxaanu u dhignaa sidan:
Cabdinaasir Cabdulle Maxamed.
Bashiir Raagge Shiiraar.
Maxamed Cali Ameeriko.
Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Saciid Cabdullahi Dani
Cabdiraxmaan Cabdishukuur Warsame.
Jibriil Ibraahim Cabdulle.
Saciid Ciise Maxamuud.
Cabdilaahi Cali maxamed (Cadow Cali gees).
Cabdilaahi Ciilmooge Xersi.
Xaaji Maxamed Yaasiin.
Axmed Maxamed Cabdi.
Sakariye Maxamed Xaaji Cabdi.
Cabdilaahi Cali Xasan.
Maxamed cali Jabarti